Bar-barihii Manchester United ee Everton oo Xaqiiqooyin Cajiib ah laga diiwaan-galiyay | Dalkaan.com
Home ciyaaraha Bar-barihii Manchester United ee Everton oo Xaqiiqooyin Cajiib ah laga diiwaan-galiyay
Bar-barihii Manchester United ee Everton oo Xaqiiqooyin Cajiib ah laga diiwaan-galiyay
Man United ayaa mar kale ku jirta heer hooseeya kulamadii ugu danbeeyay iyadoo bar-baro 1-1 kala kulantay kooxda Everton.
Xaqiiqooyin laga diiwaangaliyay Kulkankan
Ka dib markii ay bar-baro la galeen xilli ciyaareedkii hore 3-3 Everton ayaa ah kooxdii ugu horeysay ee ka fogaata guuldarro ka soo gaarta Manchester United xilli ciyaareedyo isku xiga oo Premier League ah.
Manchester United ayaa badisay kaliya labo ka mid ah todobadii kulan ee ugu dambeysay oo ay garoonkeeda ku ciyaartay (2 barbaro iyo 3 guuldarro), iyagoo badiyay sideed ka mid ah 10 -kii kulan ee ay ku ciyaareen Old Trafford ka hor intaan la ciyaarin (bar-baro 1 guul daro 1).
Everton ayaa 14 dhibcood ka heshay toddobadii kulan ee Premier League ee ay ciyaareen (badin 4 bar-baro 2 guul-daro 1); kaliya 2004-05 (16) ayay heleen wax badan ka dib todobadii kulan ee furitaanka tartanka, markaas oo ay sii wadi lahaayeen inay gaaraan booskooda ugu wanaagsan abid ee miiska kala sareynta xilli ciyaareedkaas (4aad).
Everton ayaa 7 dhibcood ka heshay boosaskii ay ka galeen Premier League xilli ciyaareedkan; ma jiro koox kale oo sidaasi sameesay.
Caawinta Bruno Fernandes ee furitaanka Manchester United ayaa ahayd goolkiisii ​​50 -aad ee uu ku lug yeesho 58 kulan oo Premier League ah (30 gool, 20 caawin); kaliya Andy Cole (43), Alan Shearer (54) iyo Eric Cantona (54) ayaa gaaray 50 gool oo isku jira iyo caawinta kulamada yar ee tartanka.
Andros Townsend ayaa dhaliyay shan gool sagaal kulan oo uu u saftay Everton tartamada oo dhan, inta uu ka dhaliyay 79 -kii kulan ee ugu dambeeyay ee Crystal Palace. Waxa uu dhaliyey seddex kulan oo xiriir ah koox Premier League ah tartamada oo dhan markii ugu horreysay xirfadiisa.
Previous articleNatiijo: Manchester United 1-1 Everton, Red Devils oo lagu qabtay bar-baro uu Sabab u ahaa Andros Townsend
Next articleAndros Townsend oo ka hadlay Sababta uu u Sameeyay dabaaldegga Cristiano Ronaldo
Xog: Beesha caalamka oo soo faro-gelisay xiisadda Galmudug iyo Qoor Qoor...